wararka maanta-arlaadii.net » Dr. Saciid Ciise Maxamud Oo Ku Dhawaaqay Musharaxnimada Madaxweyne Ee Doorashada 2016ka
Dr. Haji Saciid Ciise Maxamud (SACIM) saciidciise258@aol.com Muqdisho, Soomaaliya
Aniga oo Ah Dr. Haji Saciid Ciise Maxamud waxaan doonaya inaan la wadaago guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana waxgradka ka soo kala jeeda: siyaasiyiinta madaxbanaan, hogamiyeyaalka dhaqanka, madaxda bulshada rayidka, iyo madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, inaan u sheego inaan ahay Musharax u taagan tartanka loogu jiro qabashada xilka madaxweynenimada Soomaaliya oo doorashadiisu dhaceyso 2016ka.
Waxaan cabsi ka qabaa in talada dalka ay dib ugu soo noqdaan shaqsiyaad hogaaminta dalka ku fashilmay oo ay horkacayaan urur-diimeedyo, kuwaas oo waayoarag ku ah sida loo boobo hantida shacabka iyo mida qaranka loo leeyahay, iyaga oo aan aaminsaneyn talowadaaga uu ku dhisan yahay wadatashiga dimoqaraadiya, dibudhiska qaranimada Soomaaliyeed, iyo in dalka uu ka hirgalo sareynta xukunka sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka dalka u degsan oo ku dhisan habdhaqanka dimoqaraadiyada.
Waxaan caqabad weyn u arakaa dhaqanka kelitalisnimada ku dhisan oo ay wataan madaxda dalka iyo kuwa gobolada oo keligood isku koobay xeerinta qaabka loo gelayo doorashada iyagoon talada dalka la wadaagin siyaasiyiinta kale ee madaxbanaan, iyo iyagoo haddana noqday kuwa sida dadban ama toosan u soo xulaya ergooyinka wax dooranaya, haddana cadeystay iney yihiin musharixiin cadcad oo aysan ciduna loodi karin.
Sidaas daradeed ayaan maslaxo u arkay anigo og dhibaatooyinka fara badan ee haysta dalka inaan isku soo taago musharaxnimada madaxtinimada dalka. Waxaan aaminsanhay in shacabka Soomaaliyeed ay soo dhaweynayaan hogaan wanaagsan oo xaqiijiya samo ka talinta dowlad wanaagsan oo ku dhaqanta sharciyada u degsan dalka.
Madaxda sare ee haysa hogaaminta dowladda Soomaaliyeed waxey ku guuldareysteen iney shacabka Soomaaliyeed ula yimaadaan wax ka qabadka balanqaadyada ay qaranka u galeen 2012ka. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo wakiilada bulshada caalamka waxey madaxdaas ka dhaxleen rajobeel iyo kalsoonixumo ka dhalatay hogaanxumadooda iyo kelitalisnimada ay dalka ku maamulayaan.
Waxaa laga rajo dhigay in la helo adeegyada lagama maarmaanka u ah shacabka iyo dowladdaba, kuwaas oo ay ka mid yihiin amniga, cadaaladda, iyo dhowrista xuquuda muwaadiniinta Soomaaliyeed oo salka ku haysa xushmeynta xuquuqda Soomaalinimo, Islaanimo, iyo bani-aadamnimo. Waxaana xurmodaradooda marqaati cad u ah caburinta lagu hayo warbaahinta madaxabanaan iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Waxey madaxda dowladda Soomaaliyeed ay si joogto ah caado uga dhigteen iney mariin habaabiyaan xaalada halista ah oo sida dhabta ah uga jirta dalka Soomaaliya, xaaladaas oo ka abuurantay khatarta ka dhalatay kalitelisnimada iyo taloxumada hogaanka koox-diimeedka ka talisa madaxtooyada Soomaaliya, taas oo dhalisay in shacabka uu awoodi waayo iibsiga waxyaabaha daruuriga u ah noloshooda, sida raashinka nafaqada leh oo qiimahiisu jaban yahay, dawooyin ay huban tahay tayadeedu, guryo lagu noolaan karo, biyo nadiifa, qiimo koronto la awoodi karo, gaadiid dadweyne oo kalsooni loogu qabi karo amaanka rakaabka, iyo abuurista meherado xalaala oo ay dadku kula soo baxaan maciishada nolol sharaf leh oo heerkeedu fiican yahay.
Waxaa abuurmay naceyb sababay inuu kala gooyo xiriirka kalsooniyeed ee u dhaxeeyey shacabka iyo dowladda soomaaliyeed. Shacabku waxey waayeen cid ay kala hadlaan dareenkooda xambaarsan cabashooyinka ay ka qabaan maamulxumada iyo musuqa lagula kacayo. Waxaa shacabka Soomaaliyeed u muuqan weysey madax Soomaaliyeed oo dalka ku hogaamisa ismaamul Soomaaliyeed oo madax banaan, waxeyna shacabku ku qanceen iney gooni isaga taagan dibindaabayada iyo dhagarta ay wadaan madaxda dalka hogaamineysa.
Shacabka waxaa ka xirmay wadooyinkii ay u mari lahayeen hayadaha fulinta, garsoorka, baarlamaanka, iyo madaxtooyada, kuwaas oo shacabka ka xirtay albaabada, iskuna wareejiyey ciidamo shisheeye. Kalsoonixumada ka dhalatay wadashaqeyn la’aanta shacabka iyo dowladda waxey iftiimisay jiritaanka xasarado khatar ku ah amniga dalka inuusan soo hagaagi karin. Mucaaradnimada shacabka waxey horseeday ineysan dhankooda mudnaan u kala lahyn mucaaradka hubeysan ee xagjirka ah iyo dowladda, taas oo gelisay quus khatar ku ah rajadii laga qabey inuu soo hagaago amniga dalka, mararka qaarna ay aaminaan in xagjiriintu ka maamul wanaagsan yihiin dowlada, taas oo u fududeysa xagjiriinta iney shacabka ka helaan hiilo muruqeed.
Hogaaminta dalka ka jirta waxey horseedeysaa inuu khalalaaso siyaasadeed uu dalku dib u galo, taas oo quus gelineysa jiritaanka madaxbanaanida qaranimada Soomaaliyeed, sidaas daradeed ayaan go’aansaday inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan, gaar ahaan siyaasiyiinta madaxa banaan iyo waxgaradka kale ee soomaaliyeed inaan la wadaago dareenka uu xambaarsan yahay fariinta musharaxnimadeyda, taas oo bartilmaadeedsaneysa in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho dadban oo natiijada ka soo baxda ay noqoto mid ay ku qancaan shacabka Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliyeed waxey rumeysan yihiin ineysan madaxda sare ee dalka iyo kuwa maamul-goboleedyada aysan ku imaan rabitaanka shacabka, kuna shaqeyneyn u adeegida danta guud iyo maslaxada ummadda, Sidaas daradeed ayaan waxaan u soo jeedinaya madaxda sare ee dalka iyo kuwa maamul-goboleedyada hogaaminaya ineysan isku soo sharaxin doorashada 2016ka qabashada xilalka xaafiisyada qaranka. Madaxda sare ee dowladda waxey ku fashilmeen hogaaminta dalka, haddana waxey isku xilsaareen iney garwadeen ka noqdaan dejinta, abaabulka, xulista, iyo maamulida doorashada iyagoon talada ka qeybgelin siyaasiyiinta madaxbanaan talowadaaga siyaasada Soomaaliyeed oo lagu dhisayo hiigsiga masiirka ummadda Soomaliyeed.
Waxaan sidoo kale talo ugu soo jeedinayaa xildhibaanada qaranka in doorashada 2016ka lagu soo dhiso dowlad rasmiya oo ay u dhameystiran tahay, madaxweyne, madaxweyne ku xigeeno, xukuumad, iyo baarlamaan xilkiisu ku eg yahay labo sano oo keliya. waxaa lama huraan ah in lagu dhameystiro dowlada dhismaheeda maxkamada dastuurka oo ay u dhan yihiin caaqilo sharci yaqaana oo aysan madaxtooyadu xilka ka qaadi karin. Shacabka Soomaaliyeed doorashada 2016ka waxey ka rajeynayaan in lagu gaaro soo dhisida dowlad wanaagsan oo xiligeeda ku diyaarisa sharciyada u horseedeysa in shacabku galo doorasho xora oo dimoqaraadiya 2020, sidaasna ay dowladaas ku dhameystirto waxqabadka ay ku fashilantay dowladii iyada ka horeysey oo ku guuldareysatay dejinta xeerarka dhaqangelinaya in dalka ay ka dhacdo doorasho dimoqaraadiya.
Waxaa ku talin lahaa bisha Juun wixii ka dambeeya in la joojiyo howlaha guud oo ay hayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo xukuumada, laguna soo koobo adeegooda xaaladaha deg deg ah ee ka dhasha doorashooyinka. Xiligaas wixii ka dambeeya waxaa haboon in si rasmiya loogu dhawaaqo inuu furan yahay tartanka ololaha doorashooyinka si taas ay fursad u siiso cid walba oo daneyneysa iney noqoto musharax sidii ay isugu diyaarin lahayd ololaheeda, waxaana musharixiinta haya xilalka iyo howlwadeenada dowladda looga baahan yahay iney ka gaabsadaan u adeegsiga taageerida musharaxnimadooda ama musharaxiintooda awooda xilalka qaran oo ay hayaan.
Waxaa fiiro gaara mudan in hawlaha qabyada ah ee horyaala xukuumada iyo baarlamaanka loo daayo dhameystirkooda dowlada imaneysa oo halkeeda hawlaha qabsoomi waayey ka sii wadi doonta. Waxey taas ka hortageysaa ineysan dhicin wakhti kororsi marmarsiyo u noqda dhameystirka waxqabadkii ay dowladu ku fashilantay afar sano ka hor iney dhameyso. Sii wadida howlaha qabyada ah waxey jidka u xaareysa in si deg deg ah shacabka loogu sharciyeeyo xeerar qabyo ah oo aan dhameystirneyn iyo waxyaabo kale oo aysan raali ka ahayn ama abuuri kara xujooyin kale oo qiil u noqon kara mudo kororsi gaaban. Gudogalka la dhexgalo hawlaha federaalka ama meelmarinta dastuurka wakhtiga hadda la joogo waxaa ka dhalan kara xasarado siyaasadeed oo abuuri karta dagaalo dhiig badan uu ku daato. Sidaas daradeed ha lagu sii hayo qabyadooda kmg ah inta laga helayo dowlad cusub.
Bulshada caalamka oo ay horkaceyso UNka waxaan ka codsanayaa iney ka dhabeeyaan dadaalada ay ku balanqaadeen iney taageero xoog leh ay la garab istaagayaan doonida shacabka Soomaaliyeed uu ugu jiro helitaanka jamhuuriyad dimoqaraadiya oo leh dowlad ku soo dhisanta rabitaanka iyo awooda codka shacabka. Waxaan si gaara aan dardaaran uga soo jeedin lahaa howlwadeenada UNka oo waajibaadkoodu yahay inay Soomaaliya gacan ka siiyaan iney 2016ka ka dhacdo dorasho xal u ah si Soomaaliya ay u sii hesho nabadgelyo iyo xasilooni, iyo iney fududeeyaan ka hortaga nuuc kasta oo lagu musuqmaasuqin karo xulista iyo codka ergooyinka wax dooranaya, iyo iney shacabka kala qeybqataan horjoogsiga musharixiinta cambaareysan oo doorashada ku gelaya lacagta wasaqeysan oo lagu soo helay mariin aan xalaal ahayn. Wakiilada bulshada caalamka ka jooga Soomaaliya waxaa laga filayaa iney kaalintooda ka qaataan in Soomaaliya ay 2016ka ka dhacdo doorasho caafimaadqabta oo dib u soo celisa kalsoonida iyo rajada shacabka Soomaaliyeed.
Fariintan waxaan la wadaagayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo doonaya in dalka laga horistaago hoobadka uu ku jiro oo looga tuurayo qarka uu u saaran yahay inuu kaga dhaco ka mid noqoshada caalamka ay ka mid tahay jirtaanka jamhuuriyada Soomaaliyeed oo leh qaranimo madax banaan oo horseedeysa ismaamul Soomaaliyeed oo leh hogaaminta siyaasiyiin Soomaaliyeed oo madax banaan.
Daawo Odayaasha Beesha Leysaan Oo Ka Hor Yimid Malaaq Uu Caleema Saaray Shariif Xasan “Malaaqii Diida Liiska Uu Shariifka Soo Gudbiya Saan Ayaa Sugeysa”